अहिले हामी भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्वअवस्थामा पुर्याउन लागेका छौं । पर्यटन पूर्वाधारका ठूला काम नभएकै अवस्थामा पनि मुलुकको स्थिति नबिग्रिए चार बर्षभित्र बार्षिक १५ लाख पर्यटक भित्राउन हामी सक्छौं । त्यो हाम्रो लक्ष्य हो ।
दीपकराज जोशी. २०७२ चैत्र १७ गते 2.91K
नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार स्थापना भएको नेपाल पर्यटन बोर्ड पछिल्ला केही वर्ष अस्थिर र नेतृत्वविहीन अवस्थामा गुज्रियो । चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि बल्ल बोर्डले जोशिलो युवा नेतृत्व पाएको छ । स्वाभावले भलादमी र मिलनसार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी मुलुकको स्थिति बिग्रिएन भने आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा बार्षिक १५ लाख पर्यटक भित्राउन सफल हुने बताउँछन् । गएको वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्वअवस्थामा फर्काउन चै चुनौति रहेको अवस्थामा १५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य जोशी कति सफल हुन्छन ? हेर्न बाँकी छ । प्रस्तुत छ उनीसँग कर्पोरेट नेपालका सीताराम विलासी र लक्ष्मण काफ्लेले गरेको कुराकानीको सारः
तपाईं आएको तीन महिना भयो । यो बीचमा के के काम गर्नुभयो ?
विगत चार वर्षमा अस्थायी नेतृत्व र अस्थिर संस्थाको रुपमा पर्यटन बोर्डको पहिचान थियो । बजेट पनि पास नभएको अवस्था थियो । म आएको तीन महिनामा गर्नैपर्ने पर्यटन प्रवद्र्धनका काम निकै प्रभावकारीरुपमा गर्यौं । अर्को बजेट पास गराउने काम गरियो । आर्थिक विनियमहरु विवादित थिए । तिनलाई सुधार गरी पास गराइयो । हाम्रो टिम एकदमै सानो छ । चुनौति एकदमै धेरै छन् । त्यो हुँदाहुँदै पनि दुई चारवटा महत्वपूर्ण काम गर्न सफल भएका छौं । हामीले डिजिटल मार्केटिङमार्फत नेपालको प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । प्रविधिको प्रयोग गरे सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको यो काम दिनप्रतिदिन प्रभावकारी हुँदै गएको छ । अर्को कुरा हाम्रोमा पर्यटन प्रवद्र्धन सीमित भयो । यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको चाहना थियो । त्यो चाहनालाई पूरा गर्न पूर्वका केही संभावित ठाउँहरुलाई भारतका उदयमान शहरहरुसँग लिंक गराउने र पश्चिममा पनि जस्तो महेन्द्रनगरलाई दिल्लीसँग लिंक गराउने काम भएको छ । दुवै तर्फका व्यवसायीसँग सम्वन्ध गराइदिने काम गरिदिएका छौं ।
तपाईंलाई पर्यटन बोर्डको सिइओ हुन्छु भन्ने विश्वास पहिले थियो ?
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि तीन चार वर्ष पहिलेदेखि नै म पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । प्रतिस्पर्धीमध्येबाट अहिले म छनोट हुन सकेको हो । त्यतिबेला म हुनैपर्छ भनेर दौडधुप गर्ने, लबिङ गर्नेतर्फ लागिन । तर मलाई के विश्वास थियो भने पर्यटन विकासका लागि मैले काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वास र एउटा सोच भने भित्र थियो ।
पर्यटन बोर्डको खस्किएको इमेज (छबी) सुधार गर्छु, दोहोरिन दिन्न भन्ने के छ योजना ?
हामीले गर्नुपर्ने दुई–तीन वटा कुरा छन् । एउटा हाम्रो बिग्रिएको जनसम्पर्क कमजोर भएर पनि हो । फेरि यो संस्थाको प्रकृति कस्तो छ भने सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा चल्ने भन्ने छ । त्यो भएकोले हामीले के सोचाई राखेका छौं भने निजी क्षेत्रका संस्था र व्यवसायीसँग मिलेर काम गर्ने । किनभने सबैको प्रयासलाई सिनर्जाइज गरियो भने त्यसले राम्रो नजिता दिन्छ । देशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग राम्रो साझेदारीमा काम गर्ने भन्ने हामीले योजना बनाएका छौं । अर्को हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरामा पारदर्शीता, प्रभावकारीता र मितव्ययीता जस्ता कुरा अपनायौं भने निश्चर्य पनि केही समयमा हाम्रो छवीमा सुधार आउने छ ।
निजी क्षेत्रलाई साथ नलिई पर्यटन विकास संभव छैन । उनीहरुसँग बोर्डको लामो द्धन्द्ध रह्यो । यो द्धन्द्धलाई तपाईंले कसरी समाधान गर्नुभयो ?
हामीले हेर्यौं भने गएको तीन महिनामै निजी क्षेत्रसँगको सम्वन्धमा निकै सुधार भएको तपाईंले पाउनुहुन्छ । व्यवसायीको अपेक्षा त धेरै नै छ । कतिपय व्यवसायी साथीहरुलाई यहाँभित्रको सीमितता थाहा नहुनसक्छ । आर्थिक सीमितता, जनशक्तिको अभाव जस्ता कुरा । यो सीमितताले उहाँहरुले अपेक्षा गरेको सबै कुरा पूरा गर्न सक्दैनौं । उहाँहरुले पनि बुझनु जरुरी छ । तर त्यो हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रसँग काम गर्ने कुरामा एउटा राम्रो ‘र्यापो’ बन्दै गएको छ । सकारात्मक दिशामा छ ।
बेलायती राजकुमार ह्यारीको नेपाल भ्रमणबाट हाम्रो पर्यटन प्रवद्र्धनमा फाइदा पुग्ने देख्नुहुन्छ ?
उहाँको भ्रमण त निकै प्रभावकारी भएको छ । साह्रै राम्रो सन्देश बाहिर गएको छ उहाँको अभिव्यक्ति र नेपाल बसाईले । विनाशकारी भूकम्प र आपूर्तिको असहजताले नकारात्मक सन्देश बाहिर शिथिल अवस्थामा रहेको हाम्रो पर्यटन उद्योगलाई उर्जा दिन ह्यारीको भ्रमण महत्वपूर्ण भएको छ हाम्रो लागि । यसको लागि हामीले अप्रत्यक्षरुपमा लबिङ पनि गरेका थियौं पहिला । तर अहिले हामीले सोचेको भन्दा पनि बढि भइरहेको छ । सुरुमा उहाँको भ्रमण तीन दिनको थियो । पछि पाँच दिन भयो । अहिले फेरि छ–सात दिन थपियो । समग्रमा उहाँको नेपाल भ्रमण, उहाँको अभिव्यक्ति, उहाँका क्रियाकलाप यहाँको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि भएको छ । यसले हामीलाई उत्साही बनाएको छ ।
पर्यटकलाई देखाउने हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदाहरु अझै पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । चाँडै सुरु गर्न गराउन बोर्डले कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन ?
यस्ता सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हो । हाम्रो जिम्मामा पर्दैन । हाम्रो क्षमता पनि छैन । हाम्रो दायित्वमा राखेको पनि छैन । छिटो गराउने कुरामा हामीले लबिङ गर्ने हो । त्यो गछौं । किन भने नेपालमा पर्यटकले हेर्न खोज्ने ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदा तथा स्थलहरु नै हुन । हाम्रा प्राकृतिक सौन्दर्यहरु हुन । हाम्रो कला संस्कृति हो । पर्यटन भनेको विकास गर्ने चिज पनि हो तर यसलाई बिक्री गर्ने कला भयो भने अझ बढी बढावा दिन सकिन्छ । जस्तो अहिले हामीले निर्माण गर्ने कुराहरु ‘युनिक’ ढंगले निर्माण हुँदैछ भन्ने ढंगले सन्देश दिन आग्रह गरेका छौं । ताकी त्यो निर्माण भइरहेको कुरा हेर्न पनि मानिसहरु आउन ।
पर्यटन महाशाखालाई विभागमा परिणत गरिएको छ । बोर्ड हुँदाहुँदै समानान्तर ढंगले विभाग गठन भयो भन्ने पनि गुनासो आइरहेको छ नी ?
विभाग नहुँदा अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने जस्ता कुराहरु कमजोर भयो भनेर पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको हो । छिटो छरितो काम गर्ने हिसावले विभाग बनाइएको हो । बोर्डमा अस्थिरता आएको बेला विभाग गठन भएकोले यसको विकल्पमा विभाग गठन गरियो भन्ने कुरा बाहिर आएको हो । तर त्यस्तो छैन । विभाग र बोर्डको काम फरक छ । उद्देश्य फरक छ । एक अर्काका परिपूरक संस्था हो दुवै ।
तपाईंलाई विभागीय मन्त्रीबाट कत्तिको सहयोग वा असहयोग भइरहेको छ त ?
सहयोग छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन नै भन्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा पर्यटक आगमनको स्थिति के छ ?
वैशाखमा भूकम्प गएपछि निकै नै निराशाजनक स्थिति थियो । त्यसपछि केही सुधार होला की जस्तो थियो, आपूर्तिको समस्याले प्रभावित भयो । आपूर्ति सुचारु भएपछि हामीले उत्साहजनक रेस्पोन्स पाएका छौं ट्राभल, ट्रेकिङ, होटलहरु बुझ्दाखेरी । अहिले ट्रेकिङको सिजन पनि हो । ट्रेकिङमा जानेहरुको संख्या सन्तोषजनक नै छ ।
यति समयमा यो यो काम गर्यौं भने यति पर्यटक पुर्याउनसक्छौं भन्नसक्ने अवस्था छ ?
छ छ । केही समय अघि भिजन २०–२० भनेर २० लाख पर्यटन भित्राउने भनेर घोषणा भयो । तर त्यो भिजनमा के के भएपछि भन्ने कुरा पनि छ के । जस्तो हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती भएको हुनुपर्छ भन्ने थियो । यसको विस्तार हुनुपर्छ, सुधार हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यस्तै, लुम्बिनीको विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसक्छ भन्ने थियो । पोखरा र निजगढको विमानस्थल पनि निर्माण सम्पन्न भइसक्छ भन्ने थियो । द्रुतमार्ग सम्पन्न भइसकेको हुन्छ भन्ने थियो । तर यी कुनै पनि कुरा सन्तोषजनकरुपमा काम हुन नसकेकोले त्यो पूरा गर्न अहिले कठिन भयो । हाम्रो मुख्य बोटलनेक भनेकै नेपाल घुम्न आउछु भन्ने पर्यटकको लागि सहज आवागमन हुनसक्ने अवस्था छ । यस्ता पर्यटन पूर्वाधारहरु तयार गर्न सकियो भने पर्यटक निकै बढाउन सकिने अवस्था छ ।
पर्यटकको संख्या मात्रै भन्दा पनि उनीहरुको बसाई र खर्च गर्ने क्षमता किन बढाउन सकिएको छैन ?
यसमा सरकारी पक्षबाट अनुगमनको कमजोरी छ । अर्को कुरा व्यवसायीको इथिक्समा पनि समस्या छ । कस्तो भने धेरैजसो नयाँ व्यवसायी आउने, उसले नयाँ सेवा सुविधा दिएर होइन की अर्कोले ल्याइरहेको प्याकेजलाई सस्तो सेवा दिएर तान्ने । यस्तो खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो । तपाईंले भनेजस्तो समस्यालाई सरकारी पक्ष, व्यवसायी मिलेर नियन्त्रण गर्नैपर्छ । नत्र हाम्रो पर्यटन दिगो हुनसक्दैन । यो सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमको सेवालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समयमा सेवामा निकै सुधार आएको छ । उडानहरु धेरै जसो ढिलो हुने वा रद्द हुने उसको इमेज थियो, त्यसमा अहिले निकै सुधार भएको छ । चाँडै नै नयाँ जहाजहरु किन्ने भनेर प्रतिवद्धता पनि आएको छ । त्यो भयो भने हामी थुप्रै बजारसँग नेपाललाई जोड्नसक्छौं ।
हाम्रो पोटेन्सियल मार्केट हुन हो ? प्रवद्र्धनका कार्यक्रम कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ ?
संख्याका हिसावले भारत र चीन नै हो । हामीले मात्रै होइन, संसारले नै यो बजारलाई हेरिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो आउटबाउण्ड ट्रेण्ड त्यहीबाट छ । हामीले अधिकतम् लाभ लिनुपर्ने पनि यहींबाट हो । त्यो बाहेक परम्परागत र गुणस्तरका हिसावले पनि पश्चिमको युरोपेली मुलुक, अमेरिका, बेलायत, जापान हुन । अहिलेको उदयमान बजारका हिसावले कोरिया, अष्ट्रेलिया आएको छ । रुस, भियतनाम, इण्डोनेशिया पनि नयाँ बजारको रुपमा देखिएको छ । संभावना बोकेका बजारहरुमा बजार विस्तार गर्न केन्द्रीत हुँदैछौं । यही वर्ष हामी भियतनामको प्रवद्र्धनमा जाँदैछौं । त्यहाँको अर्थतन्त्र विस्तारमा छ अहिले । रुसमा पनि प्रवद्र्धनको कार्यक्रम चलिरहेको छ । अष्ट्रेलियामा पनि केन्द्रित भएर हामीले प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुमा प्रचारप्रसारको काम अहिले भएको छ की छैन ?
हामीले बजेट छुट्टाएका छौं । यसपाली बजेट ढिलो पास भयो । तर गर्नुपर्ने आवश्यकता ठूलो छ । हामीलाई समस्या बजेट भन्दा पनि प्रक्रिया पुर्याउन समय लाग्ने भयो ।
हाम्रो आन्तरिक पर्यटनको प्रवृत्ति कस्तो छ ? कसरी यसलाई प्रवद्र्धन गर्दैहुनुहुन्छ ?
हाम्रो छिमेकी भारत र चीनमा मुख्य पर्यटक भनेकै आन्तक हो । तर हाम्रोमा त्यति फष्टाएको छैन । विगतमा द्धन्द्ध हुँदा बाहिरका पर्यटक आउन कम भएपछि पोखरा, चितवन, लुम्बिनीबाट चासो दिइएर आन्तरिक पर्यटन बढेको हो । तर पछिल्ला दिनमा हेर्यौं, व्यवसायीसँग छलफल गर्यौं भने उहाँको रोजाई आन्तरिक पर्यटन हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा त आन्तरिक पर्यटनकै प्रमुख हिस्सा छ । खर्च पनि नेपालीले बढी गर्ने । त्यो भएर सकियो भने हामीले चाँडै नै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम गर्न खोज्दैछौं । किनभने यो महत्वपूर्ण हो तर भइरहेको छ्रैन ।
होमस्टेको अवधारणा त्यत्ति परिस्कृत हुन सकेको छैन । यसलाई कसरी सुधार गर्ने सोचाई छ ?
यसलाई गुणस्तरीय बनाउन एक खालको मेकानिजम बनाउनैपर्ने आवश्यकता छ । होमस्टे भनेको होटलको सस्तो रुप हो भनेजस्तो हुनथाल्यो । यसलाई सस्तो भन्दा पनि फरक अनुभवको रुपमा लैजानुपर्छ । यसमा परिवारको बारेमा सिक्नु, अध्ययन गर्न सकियोस् । प्राङगारिक नेपाली खानाको स्वाद लिन सकियोस् । यसलाई होटलको सस्तो रुपमा लैजान हुन्न ।
तपाईंको चार वर्षे कार्यकालको लक्ष्य के छ ?
मेले लक्ष्य बनाएको छु आन्तरिकरुपमा । यही २०१६ मा नै पर्यटकको संख्या ह्वात्तै घटेको अवस्था छ । यसलाई कम्तिमा पूरानो अवस्थामा पुर्याउन सकौं र अझै विस्तारतर्फ लागौं भन्ने योजना बनाएको छु । ठूलाठूला पर्यटन पूर्वाधारका काम हुन नसके पनि यदी मुलुकको स्थिति बिग्रिएन भने चार वर्षमा बार्षिक १५ लाख पर्यटक भित्राउन सक्छौं ।